Sida loo barto in si hufan oo qumman loo fikiro
Blogger Zat Rana ayaa ka hadlay sida hababka fekerku noo saameeyaan iyo sida loo horumariyo.
U fiirso wareegyada caadooyinka
Marka laga eego aragtida cilmu-nafsiga caanka ah, samaynta caado waa loop fudud: kicin, ficil caadi ah, abaalmarin. Adduunyada inagu xeeran, waxa ina soo food saartay wax kicinaya. Tan dambe waxay dhalisa fal aan ka baranay inaan ku fulino duruufo la mid ah koorsada waayo-aragnimadii hore. Abaalmarinta aan ku helno ficilku waxay noqotaa xoojinta wareegga. Sidan ayaa caadadu ku soo baxdaa.
Si dhow u fiirso nolol maalmeedkaaga waxaadna ku arki doontaa wareegyadan oo kale. Maskaxdeenna waxaa loogu talagalay inay helaan qaabab. Waanu aqoonsanay oo ku milmay si aanu mustaqbalka u isticmaali karno.
Si la mid ah ficillada caadiga ah, waxaa la sameeyay habab fakar caado ah. Markaan weyneyno, waxaan baranaa inaan aqoonsanno qaababka nagu wareegsan oo aan dhex galno waxa u muuqda mid qiimo leh. Laakiin waqti ka dib, waxaan ku dheggannahay wareegyadan fikradaha, taas oo ah sababta aan u aragno dhacdooyinka hal dhinac kaliya. Tani waa qayb ahaan sababta ay noogu adag tahay in aan maskaxdeena ka bedelno mowduuca qaarkood. Maskaxdu waxay wax ku baratay hal macnaha guud ka dibna waxay si khalad ah isku daydaa inay ku dabaqdo kuwa kale.
Muhiim ma aha in la jebiyo wareegyada caadooyinka, inkastoo ay suurtagal tahay. Kaliya ha ilaawin iyaga hana u oggolaan inay xaddidaan fikirkaaga.
Kala-duwan moodooyinka fikirka
Ma jiro qof dunida ku nool oo u fikira si gabi ahaanba isku mid ah, sababtoo ah qof kasta noloshiisa ayaa ugu yaraan wax yar ka duwan. Mid kasta oo inaga mid ah waqtiyo kala duwan waxa la kulma dhibaatooyin kala duwan oo uu ula falgalo sidiisa. Dareen-celintani waxay ku xiran tahay tayada dabiiciga ah iyo barbaarinteena.
Qaababka fikirka kala duwan ayaa ah waxa qof walba ka dhigaya naftiisa. Aqoonsigeenu wuxuu ka samaysan yahay isdhexgalka moodooyinkan. Waxay abuuraan aragti shakhsiyeed oo qofka.
Maaddaama ay xaqiiqadu tahay mid aad u adag, waxaa faa'iido leh inaad haysato noocyo badan oo feker ah oo ku jira arsenal. Inta badan ay kala duwan yihiin, fikradda adduunka ayaa sii badanaysa.
Nidaamyadani waxay ka samaysan yihiin wareegyo caadooyin ah oo aan samayno si aan uga jawaabno dareenka dibadda. Sidaa darteed, sida kaliya ee lagu kala duwanaan karo waa in la raadiyo waayo-aragnimo cusub oo iska soo horjeeda. Tusaale ahaan, akhrinta buugaagta, joogitaanka agagaaraha aan la aqoon, samaynta tijaabooyinka fikirka.
Geedi socodka horumarka, waxaanu samaynaa hab-dhaqan iyo fikir caado ah. Waxaan si miyir la'aan ah u isticmaalnaa si aan u khasaarin ilaha garashada mar kasta. Dhibaatadu waxay tahay, aad bay u fududahay in lagu dhejiyo hal nooc oo caan ah. Ka dib oo dhan, kuma habboona dhammaan xaaladaha, taas oo ay sabab u tahay isfaham la'aanta iyo qanacsanaanta.
Si taas looga fogaado, dhex geli inta ugu badan ee moodooyinka fikirka kala duwan ee suurtogalka ah. Fikrad ahaan, waxaad u baahan tahay inaad dareento markaad isticmaalayso mid khaldan, oo aad u beddesho mid kale.
Xuquuqda daabacaada © 2021 - so.kozmikpanda.com, Sida loo barto in si hufan oo qumman loo fikiro!